Ukuvulwa kweakhawunti ye-Offshore eGibraltar - kwiiNkampani zaseSwitzerland ezikude nonxweme
DSineenkonzo zokuvula iakhawunti yebhanki engaziwayo enamakhadi eebanki e-Asia, eMelika naseYurophu iinkampani, abantu abathile kunye neenkampani ezihlangeneyo.
Xa uthatha isigqibo sokuvula a iakhawunti yebhanki kwi-Gibraltar organ Kubalulekile ukwazi ubungakanani bemali eza kuqokelelwa kwiakhawunti njengoko ibhanki nganye inemigaqo-nkqubo eyahlukeneyo kunye neendlela zokuvula ezahlukeneyo kunye nobuncinci bezemali ekufuneka zigcinwe engqondweni.
Siza kwenza uphononongo lweempawu zayo ukuze sikunike ibhanki efanele iimfuno zakho.
Inqanaba elikhethekileyo kwi-EU
ibraltar, inezinga leBritish Overseas zone ukususela ngo-1973 emva kokudibana kwayo ne EUnited Kingdom. Nangona ikamva layo lingaqinisekanga, ihlala iyinxalenye ye-European Union nangona ikwimeko ekhethekileyo neyahlukileyo: ingaphandle komanyano lwe-EU, ngaphandle komgaqo-nkqubo wezolimo oqhelekileyo kunye ne-VAT Harmonization kwaye ayabeli nayiphi na ingeniso yesiko Umanyano. Ngenxa yokungabandakanywa kokudityaniswa kweVAT, iGibraltar ithathwa njengelizwe elingaphandle kweManyano yaseYurophu ngokunxulumene kurhwebo lweempahla.
Ayithathwa njengendawo yerhafu
Ngokwe-OECD, ukusukela nge2009, iGibraltar ayisasebenzi kwerhafu. Ngalo nyaka, i-G-20 igqibe ekubeni ivumele amazwe, iindawo eziphambili kunye nemimandla ukuba zisuswe kwi Uluhlu lweendawo zokuhlala zerhafu kunye neemeko ezahlukeneyo. Eyona nto ihlabayo: ukusayina isivumelwano sokutshintshiselana ngolwazi ibhanki enamazwe ali-12 ubuncinci. IGibraltar isayine ngaphezu kwezivumelwano ezingama-20 zolu hlobo kunye namazwe amaninzi, nangona kunjalo, hayi neSpain.
Nangona ayisekho a kwerhafu, IGibraltar igcina umtsalane wayo, ingumhlaba okhethekileyo kwi Ukudalwa kwenkampani elunxwemeni y ukuvulwa kweeakhawunti zebhanki engaphesheya kwiibhanki ezilungileyo, ezixhaswa ngurhulumente waseNgilani.
Kusemthethweni na ukuvula i-akhawunti yebhanki engaphesheya e-Gibraltar?
Kufuneka sigxininise ukuba kusemthethweni ukuvula a iakhawunti yebhanki engaphesheya e-gibraltarnjengayo nayiphi na Ulawulo lwaphesheya okanye irhafu ephantsi. Ukungabikho komthetho kubakho xa umxhamli ezi zinto iiakhawunti zaselwandle
Awuxelelanga abezolawulo kunye nababusi ngerhafu yelizwe lakho ngemvelaphi yokuvulwa kweakhawunti yebhanki.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba enye yeempawu eziphambili zolawulo lwaselunxwemeni ngasese kunye nokungachazwa kolwazi lwerhafu kubaxumi bayo.
Izizathu eziphambili zokuba une-akhawunti yebhanki engaphesheya e-Gibraltar
En amaxesha amaninzi kunenzuzo enkulu yokwenza imali kutyalo mali elizweni esingaphangeliyo kuba kwilizwe lokuhlala sihlawula irhafu ephezulu. Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuvula a iakhawunti yebhanki engaphesheya nokwenza imisebenzi phesheya:
Iindlela zokuqhubekeka kutyalo-mali lwamanye amazwe
Kuxhomekeka kwimeko, kunokuba yimali enkulu ukwenza imali kutyalo mali elizweni esingaphangeliyo kuba kwilizwe lokuhlala sihlawula irhafu ephezulu.
Imali yokugcina iirhafu
Ngamanye amaxesha, kungcono ukuba sityale imali kunye nenkampani yethu evela phesheya kuba, ukuba siyayenza ngokwenkampani yethu kwilizwe lethu lokuhlala, siya kuhlawula irhafu ephezulu.
Ukukhuselwa kwezinto kunye nokukhangela ukhuseleko kunye nemfihlo
Amathuba apho ubomi bunokudlala ngobuqhophololo: uqhawulo-mtshato, amatyala, uxanduva loluntu, isoyikiso sokuvalelwa ejele ... kufuneka sibe nayo yonke into ecwangcisiweyo nangasisiseko, iinkampani neeakhawunti zebhanki elunxwemeni singazinciphisa ezi ngxaki zemihla ngemihla.
Izibonelelo zokuvula iakhawunti yebhanki engaphesheya e-Gibraltar
as Iibhanki zaseGibraltar Banokukunika, phakathi kwabanye, ezi zinto zilandelayo zilandelayo xa uvula iakhawunti Masingalibali ukuba baxhaswa yi EUnited Kingdom
Indawo elungileyo yokuhlala kunye Inxalenye yeelwimi ezimbini (IsiNgesi kunye neSpanish).
Inzuzo kunye nolawulo lwerhafu enomtsalane kubatyali bamanye amazwe
Udumo oluhle, urhulumente ozinzileyo kunye nenqanaba elikhethekileyo ngaphakathi kwe-European Union.
Iziseko ezingcono kakhulu zonxibelelwano kunye nonxibelelwano.
Imeko yerhafu efanelekileyo kwiibhanki ezingaselunxwemeni.
Akukho zilawulo zotshintshiselwano
Ukongeza kumathuba avela kwimeko ka-Gibraltar e-EU, ikuphela komthetho onikezela ngolawulo oluguquguqukayo lwerhafu (izatifikethi zeminyaka engama-25), ukubekelwa ecaleni okufunwa ngumthetho kwi-EU wokuqokelela i-VAT kunye nemigangatho yolawulo engqinelana i-EU kunye ne-Pero ngelixa igcina ukuguquguquka kolawulo oluncinci. Zonke ezi zinto ziyenza Gilbhraltha Bahlukile ngeendlela ezininzi, kwaye bonke banako ukutsala abatyali bamanye amazwe.Ngakumbi kwisikhundla esisebenzayo se-Gibraltar kwi-EU, kufuneka kuqatshelwe ukuba kuphela kolawulo olunikezela ulawulo olululo lwerhafu, ukukhululwa okukodwa kwimfuneko I-EU yokuqokelela i-VAT kunye nemigangatho yolawulo ehambelana ne-EU ngelixa igcina ukuguquguquka kolawulo oluncinci. Zonke ezi zinto zenza iGibraltar yahluke ngeendlela ezininzi, enkosi ngokuqhubeka kwayo ukutsala inani elikhulu labatyali bamanye amazwe.
Iibhanki eziphambili ezingaselunxwemeni zisebenza e-Gibraltar
i-oster Swiss, ukubonisana ngebhanki ezimeleyo nelizwe jikelele, ineenkonzo zokuvula iakhawunti ye-offshore eGibraltarkananjalo iiakhawunti ezingaziwayo, ngamakhadi okuhlawulwa kwibhanki kumazwekazi awahlukeneyo, afana ne: Asia, Melika kunye neYurophu kwaye zihlala kwiibhanki eziphambili kwihlabathi jikelele, njenge-European Union kunye ne-United States. Iiakhawunti zaselwandle ejolise kwiinkampani, abantu kunye nakwimibutho enkulu yamashishini.